Best aelf mgbanwe
Best Buy price aelf $ 0.077814 ELF/USD ExtStock
Ahịa ahia kacha mma aelf $ 0.089686 ELF/BTC VCC Exchange
Ihe kachasị mma aelf ekpebisiri site na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na mgbanwe. Mgbanwe crypto dị iche iche nwere oke azụmaahịa azụmaahịa. Ya mere, mgbanwe ego ego aelf ọnụego mgbanwe bụ n'otu n'otu na mgbanwe ego ego ego ọ bụla. Ọrụ saịtị cryptoratesxe.com Best aelf mgbanwe na-enyocha usoro azụmaahịa n'ịntanetị na mgbanwe ego crypto niile. Ọ na - egosi n'ịntanetị kacha mma aelf ịre ma ree ọnụego ugbu a.
Best aelf obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta aelf na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma aelf na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma aelf bụ ezigbo echiche dịịrị onye nwe ego ego ọ bụla. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme maka ịchekwa ego ego yana ịme ego na ịkwụ ụgwọ maka crypto a. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. A na-agbakọ azụmaahịa kacha mma ego ego aelf na nkeji oge ọ bụla n'ihi nyocha nke azụmaahịa azụmaahịa zuru oke banyere ire na ịzụta nke ego ego.
Ụlọ ahịa aelf kacha mma
Ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe ụfọdụ enwere ọnụahịa azụmaahịa kachasị mma maka aelf, mgbe ahụ enwere ike chọọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe crypto a. Egosiputara aelf nke kachasị mma na 28/05/2020 - dị ka tebụl ọnụego ahịa azụmaahịa niile maka nkewa nkewa na abawanye ma ọ bụ ibelata ọnụego. Kachasị mma aelf ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa 28/05/2020 anyị gosipụtara na ebe dị iche na ibe a. N'ime tebụl ọnụego kacha mma aelf, ị nwere ike ịchekwa ego dị iche iche aelf ma họrọ nke kachasị mma na nke gbanwere gbanwere Ọ ka mma ịchọrọ maka mgbanwe ego ego.
BTC ETH USDT EUR TRY KRW CHFT UQC BNT USD Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa aelf nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Omgfin ELF/USDT $ 0.086955 $ 12 607 -
Omgfin ELF/ETH $ 0.087049 $ 9 731 -
Omgfin ELF/BTC $ 0.086205 $ 7 983 -
Omgfin ELF/UQC $ 0.086745 $ 3 694 -
OKEx ELF/BTC $ 0.085674 $ 5 221 562 -
OKEx ELF/USDT $ 0.085744 $ 3 082 839 -
OKEx ELF/ETH $ 0.085923 $ 1 615 132 -
Huobi Global ELF/USDT $ 0.085775 $ 243 339 -
Huobi Global ELF/BTC $ 0.085582 $ 51 517 -
Huobi Global ELF/ETH $ 0.085737 $ 32 792 -
Bitci ELF/TRY $ 0.084525 $ 4 678 -
Bitci ELF/CHFT $ 0.083832 $ 3 088 -
Bitci ELF/BTC $ 0.085112 $ 1 890 -
OKEx Korea ELF/BTC $ 0.085097 - -
OKEx Korea ELF/USDT $ 0.085776 - -
OKEx Korea ELF/ETH $ 0.086049 - -
ExtStock ELF/USD $ 0.077814 $ 293 513 -
ExtStock ELF/EUR $ 0.077886 $ 205 833 -
ExtStock ELF/BTC $ 0.078747 $ 133 024 -
MXC ELF/USDT $ 0.084666 $ 1 100 270 -
MXC ELF/BTC $ 0.084237 $ 885 993 -
MXC ELF/ETH $ 0.084475 $ 733 904 -
DigiFinex ELF/BTC $ 0.083739 $ 1 539 309 -
DigiFinex ELF/USDT $ 0.084406 $ 1 340 438 -
DigiFinex ELF/ETH $ 0.08778 $ 733 499 -
BitMax ELF/USDT $ 0.085463 $ 8 273 -
BitMax ELF/ETH $ 0.086066 $ 3 678 -
BitMax ELF/BTC $ 0.085246 $ 3 603 -
Gate.io ELF/USDT $ 0.085895 $ 16 113 -
Gate.io ELF/ETH $ 0.085915 $ 668 -
KuCoin ELF/BTC $ 0.084691 $ 2 660 -
KuCoin ELF/ETH $ 0.085629 $ 922 -
BitUBU ELF/ETH $ 0.086327 $ 9 -
BitUBU ELF/BTC $ 0.08587 $ 0.15 -
Hotbit ELF/ETH $ 0.084861 $ 38 695 -
Hotbit ELF/BTC $ 0.086014 $ 8 799 -
BiKi ELF/BTC $ 0.085021 $ 112 973 -
BiKi ELF/ETH $ 0.084954 $ 3 232 -
BKEX ELF/ETH $ 0.08481 $ 1 483 089 -
BKEX ELF/USDT $ 0.084695 $ 287 694 -
AAX ELF/BTC $ 0.083995 $ 14 273 -
AAX ELF/ETH $ 0.084641 - -
Bitrue ELF/ETH $ 0.084839 $ 106 855 -
Bitrue ELF/BTC $ 0.084463 $ 85 708 -
Huobi Russia ELF/BTC $ 0.085861 - -
Huobi Russia ELF/USDT $ 0.085978 - -
Dcoin ELF/USDT $ 0.084706 $ 51 472 -
BBX ELF/USDT $ 0.086265 $ 1 060 980 -
Bithumb ELF/KRW $ 0.083507 $ 102 520 -
Huobi Indonesia ELF/USDT $ 0.085841 $ 70 -
Kyber Network ELF/ETH $ 0.086766 $ 5 581 -
Bitvavo ELF/EUR $ 0.086082 $ 3 799 -
CoinBene ELF/BTC $ 0.084463 $ 145 011 -
Bancor Network ELF/BNT $ 0.083862 $ 8 974 -
CoinDCX ELF/BTC $ 0.087298 $ 997 -
Binance JEX ELF/USDT $ 0.085591 $ 486 875 -
HitBTC ELF/BTC $ 0.086029 $ 430 -
Upbit ELF/KRW $ 0.084743 $ 473 528 -
VCC Exchange ELF/BTC $ 0.089686 $ 1 590 -
Binance ELF/BTC $ 0.085663 $ 151 888 -
Vebitcoin ELF/TRY $ 0.086338 $ 59 815 -
Bittrex ELF/BTC $ 0.087461 $ 361 -
BitForex ELF/USDT $ 0.086278 $ 36 469 -
Ihe kachasị mma aelf ọnụego ịzụta nwere ike ọ gaghị adị na dollar, mana iji ego dị iche ma ọ bụ ego ego. Maka ụdị ego enwere ike aelf gosipụta nke dị ọnụ ala karịa ego azụtara kacha mma. aelf ọnụego ire ahịa kacha mma dị na elu akwụkwọ a na dollar dollar. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke aelf na - ere kacha mma.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego aelf mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire aelf edepụtara na tebụl dị na peeji a. Edebere mgbanwe ndị a na ọnụego kacha mma a gbanwere na dollar mgbe ị na-azụ ma na-ere aelf gaa ego ndị ọzọ na cryptocurrenrency. Anyị na-emelite ezigbo ozi gbasara ezigbo mgbanwe maka azụmaahịa na ire aelf.